मेरो उमेर 26 बर्ष भयो। मैले मेरो foreskin को operation गरेको थिए झन्डै3हाप्ता आगाडी। औषधि3हाप्ता को लागि थियो। आहिले मेरो समस्या भनेको एक्दमै पानी खान मन लाग्छ। जति बेला पानी मात्र खान मन लाग्छ। राती कैले पनि पानी नखाने म रात मा नि अहिले खको खै मात्र गर्न मन लाग्छ। अनि अहिले मेरो weight loss भको पनि छ। 65 केजि म अहिले 62 केजि छु। के कारण ले हो येस्तो भको होला। | Hamro Doctor
मेरो उमेर 26 बर्ष भयो। मैले मेरो foreskin को operation गरेको थिए झन्डै3हाप्ता आगाडी। औषधि3हाप्ता को लागि थियो। आहिले मेरो समस्या भनेको एक्दमै पानी खान मन लाग्छ। जति बेला पानी मात्र खान मन लाग्छ। राती कैले पनि पानी नखाने म रात मा नि अहिले खको खै मात्र गर्न मन लाग्छ। अनि अहिले मेरो weight loss भको पनि छ। 65 केजि म अहिले 62 केजि छु। के कारण ले हो येस्तो भको होला।
Ram Ale Magar
on Fri, Jan 11 2019 09:18 AM
प्रश्नको लागि धन्यवाद । अपरेसन र पानी तिर्खा लाग्ने समस्या बेग्लै बेग्लै समस्या हुन । तपाइको उमेर कति भयो? पानी तिर्खा लाग्ने, तौल घट्ने, धेरै खान मन लाग्ने समस्या मधुमेहको सुरुवात अवस्थामा पनि देखिन्छ । तर जाँच नगरी यहि भएको भन्न सकिन्न । एकपटक नजिकै अस्पताल गएर चिकित्सकको सल्लाहमा केही रगतको जाचहरु गराउनुहोला। अनि त्यसैअनुरूप उपचार गर्नुहोला।
on Wed, Jan 16 2019 01:02 PM
MBBS (Calcutta), MS Pediatric Surgery(Dhaka), FICS Pediatric Surgery(USA),Fellowship Pediatric Urology (UK)
मलाइ पिसाब फेर्ने बित्तिकै penis मा पोल्ने र दुख्ने हुन्छ पहिला... on Mon, Jun 24 2019 09:21 PM
मलाई पिसाब पोलिरहन्छ अनि पेनिस मा दुखाइ भै रक्छ जति खेर पनि ... on Mon, Jun 24 2019 09:17 PM
who is the best euro surgeon in Kathmandu on Sat, Jun 22 2019 08:38 AM
नमस्ते डाक्टर।समस्या भन्नू पर्दा मेरा बायाँ तर्फकाे अण्डा काेष... on Wed, Jun 19 2019 05:41 PM
Is hydrocele related to urology? If it is then what are the... on Wed, Jun 19 2019 04:24 PM